WARBIXIN: Kenya oo daraf saddexaad ku eedeysay xiisada kala dhaxeysa DF Soomaaliya – Kismaayo24 News Agency
WARBIXIN: Kenya oo daraf saddexaad ku eedeysay xiisada kala dhaxeysa DF Soomaaliya
by Mohamed Abdirashid Abaajo 25th February 2019 017
Mas’uuliyiinta dalka Kenya ayaa daraf saddexaad ku eedeeyey inay mas’uul ka yihiin xiisadda siyaasadeed ee ka dhex ooggan Nairobi iyo Muqdisho, sida uu qoray wargeyska The East African Standard ee Nairobi kasoo baxa.
Darafka saddexaad ayay Kenya rumeysan tahay inay dano ka leeyihiin shidaalka iyo kheyraadka Soomaaliy, ayna ku riixayaan dowladda Soomaaliya siyaadado Kenya ay u aragto kuwa qaldan.
Shirkadaha Soma Oil and Gas iyo Spectrum oo labadaba ka diiwaan gashan UK, ayaa horey dowladda Soomaaliya ula saxiixday heshiis shidaal sahmin iyo xog-ururin ah, waxaana dhowr jeer ay London ku qaabteen shir ku saabsan shidaalka Soomaaliya.
Hase yeeshee, Kenya ayaa rumeysan inay jiraan shirkado kale oo Soomaaliya ka leh dano shidaalmiyo mid kalluumeysi, oo ka diiwaan gashan dalal ay ka mid yihiin Holland, France, Norway, Canada, China iyo Japan.
Kenya ma aysan magacaabin shirkadaha ay ku eedeyneyso xiisadda kala dhaxeysa Soomaaliya.
Kenya ayaa sheeganeyso dhul-badeed ay leedahay Soomaaliya oo uu kheyraad ka buuxa, waxaana dhulkan haddii ay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ u xukmiso Soomaaliya uu macnaheedu yahay in Kenya ay weyn doono 26% aagga dhaqaalaha (EEZ) ee hadda ay xogga ku sheegato.
Dowladda Kenya ayaa isku dayeysa inay dowladda Soomaaliya ku cadaadiso wada-hadal si loo baajiyo kiiska maxkamadda ICJ, hase yeeshee Soomaaliy ayaa xalka kaliya ee xiisaddan u aragta go’aanka maxkamadda.
DEG DEG: Somaliland oo shaacisay dalal kale oo ku biiray Wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland
XOG BUUXDA: Maxaa ka jira in Kheyre Musharax yahay oo Farmaajo isku Khilaafeen?
admin 6th April 2019
Beesha Caalamka: looma dulqaadan doono sii socoshada Colaada Gaalkacyo.
admin 4th December 2015
TOP NEWS: Madaxweynaha iyo Raisul Wasaaraha oo Kulan Xasaasi ah Maanta kula qaatay Madaxtooyada Muqdisho Guddiga… ( SAWIRRO )